Ciidammada Itoobiya oo dad rayid ah ku laayay xadka Kenya – Kasmo Newspaper
Ciidammada Itoobiya oo dad rayid ah ku laayay xadka Kenya
Updated - March 12, 2018 7:43 pm GMT
London (Kasmo), Ciidammada Nabadgalyada Itoobiya ayaa si khalad ah toogasho ugu dilay 10 qof oo rayid ah kuna sugnaa magaalada Mooyaale ee dhacda xadka dalkaasi la leeyahay Kenya.
Wargayska ‘Africa News’ ayaa qoray isaga oo soo xiganaya Daniel Berhanen, qoraa madaxbannaan o u janjeera xukuumadda, kaas oo warka ka helay ‘Command Post’ oo ah Unug loo asaasay in uu dusha kala socdo xaaladda degdegga ah ee dalkaas saran.
Sida Berhane xiganayo Command Post waxay sheegtay in tiro ciidankaas ka tirsan oo la dhigay Mooyaale, si ay u ilaaliyaan xubno ka tirsan Ururka mucaaradka OLF ee Oromada, dileen 10 nqofood, 12 kalena dhaawaceen.
Qaar kamid ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka ayaa warbixin khilaafsan warkaan ka bixinaya dhacdada, iyaga oo sheegaya in tirade waxyeelladu soo gaartay ka badantahay intaas.
Jawar Maxammed oo fadhigiisu yahay Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in mas’uuliinta Itoobiya dabkii korontada ka jareen Mooyaale, taas oo keentay in dad badan u cararaan dhanka Kenya.
Robert Mahoney, ku-xigeenka Agaasimaha Guddiga Fulinta CPJ (Commmittee to Protect Journalists) ayaa caddeeyay in Xukuumadda Addis Ababa ka faa’ideysanayso xaaladda degdegga ah si ay u beegsato mucaaradka.
‘Itoobiya ma adeegsan karto mar kale marmarsiinyada xaaladda degdegga ah si ay u xirxirto warfidiyeennada una aamusiiso codadka mucaaradka iyo kuwa dhaliilaya’ ayuu yiri Mahoney.
Dalka Itoobiya waxaa xilligaan ka jirta xaalad xukun degdeg ah oio sida la sheegay looga hortagayo xasillooni darrada, ka dib istiqaaladdii Ra’iisal Wasaare Hailemariam Desalegn. Isbahaysiga talada haya EPRDF ayaa maalinta berri ah isugu iman doona Shirweyne la filayo in uu ka soo bixi doono ciddii xafiiska ka beddeli lahayd.